Popcorn Nguva Derivatives Anoshandiswa seMalware | Linux Vakapindwa muropa
Zvigadzirwa zvePopcorn Nguva Inoshandiswa seMalware
Trojan yakaonekwa mune dzimwe dzakasiyana dzePopcorn Nguva, chirongwa chakagadzirirwa kutenderera, icho, sezvo chichigumiswa uye chiri pachena sosi, chine huwandu hwakawanda hwesiyano.
Kana iwe ukaziviswa nezve yemahara software kwenguva yakareba, iwe uchayeuka software inonzi Popcorn Nguva, iyo yaive iri kutenderera multimedia player iyo, ichishandisa BitTorrent, yaigona fambisa neKutenderera mafirimu, zvirongwa zvepa terevhizheni ... Zvakanaka nhasi, maonesheni mazhinji emutengi uyu aonekwa, ayo ari kushandiswa semarware.
Sezvo kodhi yekodhi yePopcorn Nguva iri yemahara, vanhu vazhinji vari kugadzira makopi echirongwa izvozvi. inosanganisira zvirongwa zvine njodzi mukati marokana. Semuenzaniso, zvakataurwa mukati Reddit kuti Trojan inogona kuva nenjodzi yakaonekwa mune dzimwe shanduro dzechirongwa ichi, icho chakaiswa kana ichimisa iyo yekuisa chirongwa.
Neraki, hutachiona hwakaonekwa hunonyanya kukanganisa mashandiro eWindows, zvisinei, izvi zvinoita kuti ufunge zvishoma uye zvinoita kuti iwe ufunge kuti yemahara software haina chete ine zvinhu zvakanaka, zvakare ine zvinhu zvisina kunaka.
Icho chinoshamisa cheakavhurika sosi zvirongwa ndechekuti chero munhu anogona shandura iyo kune yako kufarira uye wedzera uye bvisa zvinhu sezvaunoona zvakakodzera. Izvi zvinowedzera yemahara software nharaunda, asi nguva nenguva vanhu vane utsinye vanoverevedza kupinda munharaunda.
Panyaya yePopcorn Nguva, ivo vakatora mukana wezano rakakura (iro rekutanga chirongwa chakamiswa makore apfuura, nekuda kwekunyunyuta kunobva muindasitiri yemafirimu) kuisa Trojan, Kutenda iko kombiyuta yemunhu akabatwa inogona kudzorwa pamadiro.
Kune izvi zvese, iwe unofanirwa kuchenjerera izvo zvaunotora uye uone kana iyo vhezheni yePopcorn Nguva kana chero chimwe chirongwa chiri chakavimbika, nekuti inogona kunge iri malware chirongwa. Kuti uitarise, unogona kushandisa webhusaiti VirusTotal, iyo inoongorora mafaera uye mapeji ewebhu anofungidzirwa kuve malware yemahara.
Kana iwe uchida gadza PopCorn Nguva zvakachengeteka, tevera nhanho mune dzidziso yatichangobva kukusiya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Zvigadzirwa zvePopcorn Nguva Inoshandiswa seMalware
Ini ndanga ndichizonyora chinyorwa pamusoro penyaya iyi, iyo malware inonzi "Gadziriso.exe" iri mune imwecheteyo yekuisa folda se popcorntime, zviri nyore kubvisa, iwe unongomisa sevhisi yayo woenda woidzima.
uye iwe unokwanisa kuwana iyo sosi kodhi yeexe iyo inobata makomputa? nekuti kana zvisiri, iri software yemahara chaizvo sezvataurwa pano? Kana isu tiri kutarisana nenyaya iyo sosi yekodhi software yaive yakarongedzwa neisina kuvhurwa / yemahara malware, handiti?
Juan David (@rocandante) akadaro
Ini ndinofunga urikugadzira nyonganiso yevaverengi nemifananidzo yaunovhura nayo chinyorwa ichi, apo ini pandinoverenga mune reddit mushumo iwe waunobatanidza, iwo anoenderana nesaiti inonzi yakachengeteka (Popcorntime.ag Is Safe). Iwe unogona kunge uchipa zano kuti akadaro webhusaiti inogovera popcorn nguva mabhaari ane malware kana mavhairasi kana zvisiri. Zvakare zvisina kukodzera ndiko kuda kwako kuti nguva yepopcorn yakavharwa makore apfuura, chirongwa ichi chakavharwa gore rapfuura uye makopi akasiyana siyana ave kubuda kubvira ipapo.
Pindura kuna Juan David (@rocandante)
LXA vanhu havanzwisise maitiro avanoramba vachirega Azpe achiburitsa, isu tinobva kuzvinyorwa zvake zvepakati peArchlinux, uye ikozvino iko kupinda kwetabloid. Ndinovimba vachaita chimwe chinhu nezvazvo, yavo yekunyora mutsara yakanaka kwazvo, asi ichirega vanhu vakaita seizvi vanyore pablog ravo, pachinzvimbo chekuwana vaverengi - ini ndinofunga - ivo vacharasikirwa navo, zvinonyadzisa chaizvo.
Andres Villa akadaro
Muchokwadi, zvese kamwe-kamwe, popcorntime skrini dzakatanga kuoneka pasina kana kuiisa, uye inoita sehutachiona.Handizive kuti yakasvika sei pc yangu, asi yakakanganisa basa rangu. Icho rudzi rweVIRUS.
Pindura Andres Villa
Eset anoramba achindimisa. Iyo faira encryptor. Ini ndaifanirwa kuti iongororwe. Sezvo ini ndaverenga iri rudzikinuro. Ndiri kuyedza kuzvibvisa.
Kune avo vanoti harisi hutachiona, ini ndototi hongu. Ndakave nematambudziko mazhinji.
Pindura kune modeff